admin – Page2– MC Tv Club
ယနေ့ည လူစည်ကားလှတဲ့နေရာတွေမှာ အင်အားအပြည့်နဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည့်မန္တလေး
ဒီမိုကရေစီငတ်နေတဲ့လူငယ်တစုရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့၆၂လမ်းမကြီးပေါ်သောသောညံအောင်ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ အလက၁၂ ထခွဲ အခြေခံကျောင်းသားများသမဂ္ဂ သပိတ်စစ်ကြောင်းမန္တလေးလူငယ်များသပိတ်စစ်ကြောင်း ယနေ့ညမန္တလေးမြို့ဟာစည်းကားလွန်ပြီးသပိတ်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးဟာနေစဉ်မပြတ်အားမလျော့ပဲဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာဖြစ်ပြီး။ ဒါဟာတော်လှန်ရေးအတွက်အင်အားတစါခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုရပါတယ်။ Photo credit- Spring Diary Zawgyi/ ဒီမိုကရေစီငတ်နေတဲ့လူငယ်တစုရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့၆၂လမ်းမကြီးပေါ်သောသောညံအောင်ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ အလက၁၂ ထခွဲ အခြေခံကျောင်းသားများသမဂ္ဂ သပိတ်စစ်ကြောင်းမန္တလေးလူငယ်များသပိတ်စစ်ကြောင်း ယနေ့ညမန္တလေးမြို့ဟာစည်းကားလွန်ပြီးသပိတ်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးဟာနေစဉ်မပြတ်အားမလျော့ပဲဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာဖြစ်ပြီး။ ဒါဟာတော်လှန်ရေးအတွက်အင်အားတစါခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ ပိုမိုဆိုးရွားလာနေပြီး ပြည်တွင်းစစ်ဆီ ဦးတည်နေပြီလို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်က ပြောပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်သွားဖို့ အခွင့်အရေးဟာ ပျောက်ဆုံးသွားပြီး နောက်ထပ် ပစ်မှတ်ထား ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေ လုပ်တာဟာ အထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း မကြာမီမှာ ရာထူးက နုတ်ထွက်တော့မယ့် ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် ခရစ္စတင်း ရှာရနာ ဘူဂနာက အရိပ်အမြွက် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့က နယူးယောက်ခ်မြို့ …
ယခု ရန်ကုန်မြို့လယ်က ဘဏ်တစ်ခုဓားပြတိုက်ခံရ
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်ရှိ Urban Asia မှ ကမ္ဘောဇဘဏ် ဓါးပြတိုက်ခံရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ၄၈ လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်ရှိ Urban Asia တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ကမ္ဘောဇဘဏ် ကိုဓါးပြတိုက်မှု နေ့လည် ၁ နာရီကျော်အချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ထိုအနီးတစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်သူများကဆိုသည်။ သေနတ်ကိုင်ဆောင်ထားသည့် လူရွယ်အမျိုးသားသုံးဦးက ဘဏ်ထဲကို ဝင်လာပြီးနောက် လူများကို ခေါင်းငုံ့ထားစေပြီးနောက် ကောင်တာပေါ်ရှိငွေများကို ထည့်ယူသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း …
ပြည်သူ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်း PDF လူငယ်လေးတစ်ဦးကျဆုံး
Mandalay Special Task Force(MSTF) တပ်စုမှုး သခင်BB (ခ) ကိုညီညီဖြိုး 2021.10.16 ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံး။ ပြည်သူ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွားသော တပ်စုမှူးအား ကျွန်တော်တို့ PDF Channel အဖွဲ့သားများနှင့် ပြည်သူများမှ အစဥ်ထာဝရ အလေးပြု အမှတ်ရနေမှာပါ။ zawgyi/ Mandalay Special Task Force(MSTF) တပ်စုမှုး သခင်BB …
ယနေ့ PDF စခန်းနှစ်ခုဝင်ရောက်စီးခံရ
အရာတော် Local Ranger -LRG ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စခန်းကို ယနေ့မနက် ၄ နာရီအချိန်ခန့်က အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်ရောက်စီးနင်းခြင်းခံရတယ်လို့ သိရပါတယ် ယနေ့မနက် ၄ နာရီလောက်မှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ဒိုင်နာအိမ်စီးကား (၇) စီးကိုအသုံးပြု၍ အရာတော်မြို့နယ်ရွာလမ်းတွေကမဟုတ်ဘဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့ မြင်းမူမြို့နယ်ဘက်မှတဆင့် ရွာအသေးလေးလမ်းတွေကစဝင်လာပြီး ရွာသားတချို့ကိုဖမ်းဆီးကာ PDF စခန်းတွေကို လိုက်ပြခိုင်းတယ်လို့ သိရပါတယ် LRG တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး …
ကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကတော့သေခြင်းကိုငါလိုက်မယ်၊ ငါ့ကိုမဆွဲနဲ့ငါ့ဘာသာ လိုက်ခဲ့မယ်။ သေခြင်းတရားရဲ့ ဟိုဘက်မှာ ဘာတွေရှိလဲသိချင်သွားတာပါ။ တစ်ပတ်လောက်လောက် သတိလစ်သွားတဲ့အချိန်ကနေ ပြန်ကောင်းလာတယ်။ ဦးဇော်ဇော်က အဓိကကျေးဇူးရှင်ကြီးပါ။ အခုတော့ နေကောင်းပြီး လိုက်ဖ်လွှင့်နေတယ်။ ကွန်းမန့်လေးတွေ တက်လာရင်နေကောင်းလား၊ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေဆိုတဲ့ မန့်လေးတွေကို အရမ်းပီတိဖြစ်လို့ပါ.. ဆိုတဲ့ ဦးမိုးဒီ။ Zawgyi/ ကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကတော့သေခြင်းကိုငါလိုက်မယ်၊ ငါ့ကိုမဆွဲနဲ့ငါ့ဘာသာ လိုက်ခဲ့မယ်။ သေခြင်းတရားရဲ့ ဟိုဘက်မှာ ဘာတွေရှိလဲသိချင်သွားတာပါ။ တစ်ပတ်လောက်လောက် သတိလစ်သွားတဲ့အချိန်ကနေ …
NUG နှင့်စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ကာ မြန်မာ့အရေးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမည်ဟု အမေရိကန်အကြီးတန်းအရာရှိဆို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရာတွင် စင်္ကာပူသည် အလွန်အရေးကြီးသည့်အခန်းကဏ္ဍ၌ ပါဝင်နေပြီး စင်္ကာပူတွင် မြန်မာစစ်တပ်ကို ဖိအားပေးရန် အရေးပါသည့် ငွေကြေးအင်အားလည်းရှိနေကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ၎င်း၏ ၃ ရက်ကြာ အရှေ့တောင်အာရှ သုံး နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ကြာသပတေးနေ့ (အောက်တိုဘာ ၂၁) တွင် ဆိုခဲ့သည်။ ယခုအပတ်အစောပိုင်းတွင် …
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရှိနေသရွေ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်
Unicode: အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရှိနေသရွေ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်နိုင် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရှိနေသရွေ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener က နိုင်ငံတကာကို သတိပေးပြောလိုက်ပါသည်။ ရာထူးတာဝန်ကနေနုတ်ထွက်တော့မယ့် Christine Schraner Burgener ဟာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဒီကနေ့တွေ့ဆုံရာမှာ သတိပေးပြောလိုက်တာဖြစ်ပါသည်။ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးကို လုံးဝစိတ်မဝင်စားသလို လက်ခံခြင်းလည်းမရှိဘူးလို့ သူကပြောပါတယ်။ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သူတို့နဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကို …
ထိုင်းနိူင်ငံဆေးရုံးကို သိမ်းခဲ့တဲ့ အမွှာညီအကိုနဲ့လေးကျင့်မှုပြုလုပ်နေသည့်မြင်ကွင်း
Unicode: ဆရာလူသာထူးရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ နိုးကြားမှု့တွေအပြည့်ရသွားတဲ့ ရဲ‌ဘော်တွေမှာ မျက်နှာလေးတွေချောင်ကျသွားတယ် ကရင်ရဲဘော်တွေနဲ့ အတူတိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီ …. ကျုပ်တပ်ရဲ့ စည်းကမ်းကတော့ရှင်းတယ် (၁)မတွေးနဲ့ (၂)မတွေနဲ့ (၃)မစပ်စုနဲ့ (၄)စောက်တင်းမပြောနဲ့ …. စစ်‌ေကာင်စီကို မြေဩဇာလုပ်ရင် စစ်ကောင်စီလက်ဝေခံ တော်လှန်ရေးပွဲစား၊တော်လှန်ရေးအာချောင်၊တော်လှန်ရေး အတိုအစ၊တော်လှန်ရေးဘုရားလူကြီးဖာခေါင်း၊တော်လှန်ရေးဂဂျောင်၊တော်လှန်ရေးသံယောင်လိုက်၊တော်လှန်ရေး အောက်တန်းစား၊ တော်လှန်ရေး ခွေးသူခိုး၊တော်လှန်ရေး လူကုန်ကူး၊တော်လှန်ရေး အကောက်ကောက်စားတဲ့ကောင်၊တော်လှန်ရေးကလိမ်ကကျစ်၊တော်လှန်ရေးသူခိုးလူဟစ်၊တော်လှန်ရေး ပရောဂျက်ရှာစားတဲ့ကောင်၊တော်လှန်ရေး ခေါင်းစဉ်တပ် စစ်ထွက်ဖို့ချီးချမ်းနေတဲ့ကောင်၊တော်လှန်ရေးဂုတ်စီး၊တော်လှန်ရေးခေါင်းပုံဖြတ်၊တော်လှန်ရေးဂုတ်ကျား၊တော်လှန်ရေး သူ့လူကိုယ့်ဘက်သား …